Kuronga Kunze kwekufamba Mugwagwa nemumwe Munhu muWiricheya | Karman® Mawiricheya
Iwe newaunoda mudiwa wevashanyi? Iwe unogona kunge uchironga rwendo rwemugwagwa nevako vaunoda, handiti? Uye iwe uri pane ino peji nekuti mudiwa wako ari mu wiricheya, uye iwe unoda kuronga a wheelchair yakakwana rwendo nenzira.
Kufamba munzira nemudiwa wako zvizere nekunakidzwa uye zvinopa iwe neruzivo rusingadhuri kuita kuti nguva dzako dzive dzakanaka uye dzisingakanganwike. Nekudaro, isu tinogona kunzwisisa kunetseka kwako maererano nekuronga rwendo rwemugwagwa nemumwe munhu mukati wiricheya uye kuti ingaite kunge yakaoma sei.
Heano mafambiro akajeka ekuti ungaronga sei rwendo rwemugwagwa nemumwe munhu mune wiricheya.
Sarudza kwauri kuenda
Iwe unofanirwa kuronga kwekuenda kwerwendo rwako mushure mekuwanda kwekutsvaga uye kubvunzana newaunoda. Unogona Google wiricheya nhare dzekufambisa kana kungoshanyira iwo mablog wiricheya kufambidzana mazita ekuenda. Tarisa uone mamwe edu epamablog mablog ezvikuru wiricheya nzvimbo.
Ongorora nzvimbo imwe neimwe uye sarudza iyo inokodzera zvaunoda.
Tip: Edza kusarudza kwaunosvika uine mukana we; zvaunofarira kuona, mahotera ane wiricheya kufambidzana dzimba, wiricheya senga kana matekisi, migwagwa ine magedhi akadzika uye mashopu asingamhanyire uye maresitorendi.
Sarudza kuhaya yekushanya yekushanya nyanzvi kana kwete
Kana iwe uchinzwa sekunge iwe haugone kubata rwendo iwe uri wega, hire a travel tour specialists. Iwe uchawana akasiyana mafambiro ekufambisa ayo ane hunyanzvi mukugadzirisa nzira dzemumigwagwa dze remara vanhu. Zvisinei, zvinogona mutengo iwe zvakanyanya, saka sarudza kana iwe uchida kuzvibata wega kana kuhaya mumiririri zvinoenderana nebhajeti rako.
Kufunga nezve maitiro e kutakura
Zvakare zvinoita kunge zvisina basa? Asi, parwendo rwemugwagwa, iwe unozoda imwe mhando yemotokari.
Saka, usati watanga rwendo rwako sarudza, kana uchizoshandisa mota yako parwendo kana kubvarura imwe. Uchatanga sei rwendo kubva kumba? Iko here hop kubva kuguta rako rekubva kana imwe-nzira rwendo?
Iwe unogona kuve nesarudzo nhatu kusarudza mota yako;
Iyo yakanyanya nyore- shandisa mota yako wega. Iwe unogona nyore nyore kuchengeta zvinhu zvako zvese mazviri, uye zvakare, mudiwa wako anogona kunge akajaira kwazviri.
Iyo inogoneka- bhururuka uchienda kwaunoda kuenda uye ubvarure an kufambidzana mota ipapo. Unogona kuwana wiricheya hazvina maturo pamaroja kubva kune vakawanda vakazvimiririra vatengesi kutenderera nyika.
Zvirinani Zvinoshanda- rent wiricheya yekuvaraidza mota (RV). RV zvinyorwa uye zvakajairika zvinogona kusanganisa-kumusoro, saka ita shuwa kuti unotora chaicho.
Basa rinonyanya kukosha asi rakaoma apo uchironga rwendo rwemugwagwa kutora hotera muguta risingazivikanwe kana nyika. Nekudaro, iwe unogona bhuku wiricheya inowanikwa makamuri ehotera online ikozvino.
Tip: Sarudza hotera ine tsananguro yakajeka yekuve ne kufambidzana tub kana roll-in shower. Zvikasadaro, unogona kudaidza hotera kuti isimbise kana kutsvaga online kufambidzana makamuri. Tsvaga muGoogle senge 'wiricheya kufambidzana mahotera (zita reguta) '.
Zvimwe zvakakosha kuti utarise
Iwe unozofanirwa kubhadharisa nharembozha yako nemimwe michina yemagetsi, handiti? Zvibvunze kuti ndeapi maadapter auchada kubhadharisa michina yako?
Njodzi dzinongoitika dzoga. Ita shuwa yekutora inishuwarenzi yekufamba usati watanga rwendo rwako.
Iva wakagadzirira kune emergency. Ita shuwa kuti une imwe mishonga; mbatya dzekuwedzera; imwe mari nezvimwe zvinhu zvinodiwa.
Ndizvo zvose! Iva netariro mukati kuti unzwe iko chaiko kwekushanya kwako uye uve neruzivo newaunoda.